လုပ်ငန်းခွင်အတွက်လိုအပ်သော Brainstorming ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပြဿနာ တစ်ခုကို အဖြေရှာဖို့ Brainstorming ကို သင်ဘယ်နှကြိမ်များ အသုံးချဖူးပါသလဲ? ဖြစ်နိုင်တာကတော့ သင်သတိမထားမိဘူးဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တော့ အသုံးချဖူးမှာပါ။ လူတွေဟာ Brainstorming ကို…
ခြေထောက်ချိတ်ပြီး ထိုင်တဲ့အလေ့ အထက ကောင်းပါသလား?
ခြေထောက်ချင်းချိတ်ပြီးထိုင်တာဟာ အလေ့အထတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေက သူတို့ထိုင်နေတဲ့အခါဘာလုပ်မိတယ်ဆိုတာ သတိမထားမိကြပါဘူး။ ဒူးတစ်ချောင်းပေါ် နောက် ခြေထောက်တစ်ချောင်းထပ်ပြီးထိုင်မိတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးအတွက် ပြဿနာအနည်းငယ်ရှိပါ တယ်။ သွေးဖိအားစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအရ ခြေထောက်ချင်း ချိတ်ပြီး…
ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို စနစ်တကျ စားသင့်လဲ
အစားအစာကို အချိန်မှန်စနစ်တကျ စားသုံးဖို့ဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ စားချင်တဲ့အချိန်စား၊ စားချင်သလောက်စားနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို စနစ်တကျ စားသင့်တယ်ဆိုတာကို လေ့လာလိုက်ရအောင်။
လိင်ကိစ္စမဆောင်ရွက်မှီ ၁။ ကောင်းကောင်းအနားယူထားပါ။ သုတ်လွှတ်မြန်တယ်ဆိုတာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်ပါ။ ကာမစွမ်းဆောင်ရည်မပြည့်ဝတာကို တခြားနည်းလမ်းပြောင်းပြီး မိမိစိတ်ဆန္ဒပြည့်ဝအောင် မဖန်းတည်း ပဲမနေပါနဲ့။ ယုံကြည်ချက်ထားပါ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားပါ၊ ကြောက်ရွံသံသယစိတ်တွေက သင်နှင့်သင့်ရဲ့အဖော် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအတွက်…
T-Shirt တွေကြာကြာဝတ်လို့ ရအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ
သင်တို့ ရဲ့ T-Shirt တွေ ၀တ်တာကြာလာတဲ့အခါ ကြုံ့ခြင်း၊ တွန့် ခြင်း၊ အရောင်လွင့်ခြင်း၊ ရိရွဲခြင်း၊ စတေကာများ ပျက်စီးအက်ကွဲလာခြင်း နဲ့ချည်စထွက်လာတွေကို…
ဦးနှောက်နဲ့မှတ်ဉာဏ်ကို တိုးတတ်မြင့်မားစေတဲ့ အသီးအနှံများ
သင်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့အသီးအနှံတွေက တစ်ခုခုအကျိုးပြုနေတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ အသီးအနှံတစ်ခုချင်းစီမှာလည်း စွမ်းအင်ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိနေပါတယ်။ ရောဂါတွေကို အရှင်းပျောက်ကင်းစေအောင်တော့မကုသပေးနိုင်ပေမယ့် သက်သာအောင်တော့ ကာကွယ်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။ အခု ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဘယ်အသီးအနှံတွေက အကျိုးပြုနေသလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။…
Nick ဟာ သူ့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး မင်းသမီးနဲ့ Jill နဲ့ dinner အတူစားခွင့် မဲပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစီစဉ်ကို Jill ဖက်က ဖြတ်သိမ်း…